I-Brand24: Sebenzisa ukumamela ekuhlaleni ukukhusela kunye nokukhulisa ishishini lakho | Martech Zone
NgoLwesihlanu, ngoDisemba 23, 2016 Douglas Karr
Kutshanje besithetha nomthengi malunga nokusebenzisa imithombo yeendaba kwaye ndothukile yindlela ababi ngayo. Baziva benyanisekile ngokungathi yinkcitha xesha, ukuba nje abanakho ukufikelela kwiziphumo zeshishini kunye nabathengi babo bejinga kwi-Facebook nakwezinye iisayithi. Kuyaphazamisa ukuba oku kuseyinkolelo exhaphakileyo ngamashishini emva kweshumi leminyaka yokufunda indlela yokusebenzisa izicwangciso kunye nezixhobo zokunceda. Kuphela yi-24% yeempawu ezithi ziyayenza Ukumamela ngokwasentlalweni
Ukumamela ekuhlaleni yinkqubo yokusebenzisa izixhobo zokujonga ixesha lokwenyani ukumamela ukukhankanywa kwegama lakho, imveliso, abantu okanye imboni ekwi-intanethi, kunye nokulinganisa ukukhankanywa ngokuhamba kwexesha. Izixhobo ezikhethekileyo ziyafuneka kuba iinjini zokukhangela azixeli olu lwazi ngexesha langempela-zihlala zilahleka uninzi lweencoko kwiindawo zosasazo zasekuhlaleni ngokupheleleyo.
Endaweni yokuqhambuka ngokuboniswa kweenkcukacha-manani ezothusayo, sibabonisile nje ukuba isebenza njani. Kudala sivavanya Brand24 isithuba esingaphezulu kwenyanga ngoku kwaye sithanda ubulula bokuseta kunye nokubeka esweni iimveliso zethu, abantu, iimveliso kunye nomzi mveliso ngeqonga- emva koko yaziswa xa kukho amathuba. I-Brand24 ine-interface ecocekileyo kakhulu, iyafikeleleka, kwaye inezilumkiso ezibanzi ze-imeyile.
Sebenzisa ukumamela ekuhlaleni ukukhusela kunye nokukhulisa ishishini lakho
Sibonise abathengi bethu indlela yokusebenzisa amajelo eendaba ezentlalo ngokulungiselela ishishini, siqhuba ngetoni yemeko:
inkonzo -Siye saqhuba imibuzo saza sachonga apho uphawu lwabo belukhankanyiwe kwi-intanethi, kodwa akukho namnye kwinkampani yabo ophendulayo. Yayilithuba elilahlekileyo lokuhambela phambili kwimeko engentle kwaye sincede omnye wabathengi babo aphume… kodwa baliphosa. Inkampani khange iqonde ukuba iincoko zazisenzeka apho zazingakhange zifakwe ngqo kwincoko.
Intengiso -Senze imibuzo ethile ngeenkonzo zabo kwaye sababonisa apho abanye abathengi abanokubakho kwi-intanethi bebuza malunga neenkonzo abanokuzinika zona… kodwa iimpendulo zaye yonke inethiwekhi yethemba izama ukunika iingcebiso. Khawufane ucinge ukuba elinye leqela labo lithengisile kwaye linike ingxelo yobungcali. Umthengi omtsha? I-54% yabathengisi be-B2B bathi bavelise izikhokelo ezivela kwimidiya yoluntu
wokuKhuthaza -Inkampani yayiye kwiminyhadala ethile apho babekhuthaza iinkonzo zabo. Sibabonisile apho abanye abantu kwishishini labo babeka iintlanganiso ezicwangcisiweyo kunye nababenokuba ngabathengi ngaphambi komsitho ngeendaba zosasazo. I-93% yezigqibo zokuthenga zabathengi zichaphazeleka kwimidiya yoluntu
Marketing -Inkampani yayisenza intengiso ethile yesiko kodwa ayizange ityhale abantu kwindawo yabo ngolwazi oluthe kratya. Kwindawo yabo, babenee-ebook kunye nezinye izixhobo, kodwa zange babakhuthaze kwi-intanethi. Sibabonisile ukuba abo bakhuphisana nabo bakhuthaza njani umxholo kunye nokuqhuba kukhokelela kumaphepha okufika.
Ukugcinwa -Sibonisile inkampani ukuba ezinye iinkampani zazinceda abathengi bazo kwi-intanethi ngokubonwa luluntu, zibonelela ngenkxaso enkulu ngayo nayiphi na ijelo… kanye ngendlela umthengi awayefuna ngayo. Ayisiyondlela ilungileyo yokugcina abathengi bakho, kodwa ivumela abanye abathengi abanokubona inkonzo enkulu. Kuphela yi-39% yamashishini anika ingxelo esebenzisa idatha yabathengi kunye neendlela zokuziphatha ukwenza isicwangciso sentengiso
nokuqonda -Sibuze ukuba bayifumana njani ingxelo ngeemveliso kunye neenkonzo zabo kwaye bathi benza uphononongo lwamaxesha ngamaxesha kunye neefowuni nabaxumi. Sibabonisile ukuba bangaluqhuba njani uphando olwahlukileyo kwimithombo yeendaba zentlalo ukufumana ingxelo eqhubekayo kunye nabathengi abasebenzayo ngaphandle kokuchitha imali eninzi. I-76% yabathengisi ithi kufuneka ijolise ngakumbi kwidatha ukuze iphumelele
Impembelelo -Inkampani yayinabathengisi kunye namaqabane kolu shishino ababebalasele, kodwa khange baqonde oku kulandelayo kwaye babaphembelele abanye babo bantu kunye neenkampani ezazine-intanethi. Sibabonisile ukuba banokufumana njani kwaye bafumane njani uncedo lwabashukumisayo ukuba bafikelele kubaphulaphuli abatsha, abachaphazelekayo ngaphandle kokuchitha imali eninzi kwintengiso.
Ubume -Sibabonisile ukuba banokubeka iliso kwaye baphendule njani kwisigxeko esibi esenziwe kwi-intanethi eluntwini. Ayiphenduli nje kuphela, banokubonelela ngempendulo evumela abanye abathengi ukuba babone indlela abazinyamekela ngayo ezi meko.
Reviews -Sibabonelele ngenani leendawo zokujonga kwakhona kumzi-mveliso wabo, ezinye ababengazi nokuba zikhona. Siwafumene ngokwenza uphando malunga nokuba abo bakhuphisana nabo bakhankanywa phi. I-90% yabathengi bayazithemba iingcebiso zontanga ngaphezulu kwe-14% abathembela izibhengezo
umxholo -Xa sibonisa ukusebenzisana kwabo sikhuphisana nabo, sikwazile ukufumanisa incoko eneenkcukacha ethe yafumana ingqalelo enkulu-ithuba elifanelekileyo lokubhala incwadi ye-ebook okanye ukukhupha i-infographic.
Usesho Lwemvelo -Sibabonisile ukuba ukwabelana nge-infographics kukhokelele ekukhankanyweni, okukhokelele kwezinye iisayithi ekwabelana ngazo, ukuvelisa amakhonkco afanelekileyo kunye nokugunyazisa okuphezulu okuqhuba ubume bokukhangela izinto eziphilayo.
yokugaya -Sibabonisile ukuba bangaqala njani ukujolisa kunye nokutsala italente kwinkampani yabo ngemidiya yoluntu.
ekwizinga -Sibabonisile ukuba izihloko ezikushishino lwabo zikhula njani okanye zincipha ngokuhamba kwexesha, zibenza ukuba benze izigqibo zentengiso kunye nezentengiso ngokubhekisele kwiimveliso kunye neenkonzo zabo.
iNethiwekhi -Sibonisile ukuba bekungaphindaphindwa njani ukuba bangaphi abantu abalandela uphawu, iphepha, okanye umntu kwimidiya yoluntu-yindlela abenza ngayo ukuba banxibelelane neenethiwekhi ezintsha zethemba.
Qalisa isilingo samahala seBrand24
Ukuba inkampani yakho ivuliwe Musa, IBrand24 inomdibaniso omkhulu. Kulungile, banento entle kakhulu usetyenziso lweselula njengokuba.
Izibalo zokuphulaphula ekuhlaleni ukusuka B2C
tags: I-brand24Ukuqonda kwabathengiukugcinwa kwabathengiInkonzo eyenzelweiintsingiselo zabathengifumana abachaphazeliiindlela zeshishiniukuhlolwa kwemvelisoidumelaulawulo lwegamaReviewsUphando lwezoPhandoUkumamela ngokwasentlalweniukwazisa ngemidiya yoluntuukubeka iliso kwezentlaloukuthengisa kwezentlaloukuthengisa kwezentlaloukulandelela uphononongo lwemveliso
Jan 2, 2017 kwi-7: 15 AM
Inqaku elihle! Enkosi ngokukhankanya kunye nokucebisa i-Brand24 ♥